Itoobiya: Dhiggii Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar Ee Oromada Oo La Dalacsiiyay - Wargane News
Home Somali News Itoobiya: Dhiggii Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar Ee Oromada Oo La Dalacsiiyay
Raysal wasaaraha dalka Itoobiya ayaa wasiirka gaashaan dhigga u magacaabay madaxweynahihii gobolka Oromada Lemma Megersa.
Lemma Megersa ayaa ahaa madaxweynaha Oromada waana nin magac iyo maamuus ku leh bulshada Oromada ah, sida uu BBC-da u sheegay Mukhtaar Ismaa’iil oo wax ka qora siyaasadda dalka Itoobiya.
“Kacdoonkii ay Oromadu xukunka kula wareegeen raggii hoggaaminayay ayuu ka mid ahaa, wuxuuna caan noqday markii isaga oo xisbiga talada haya ee EPRDF ka mid ah uu ka soo horjeedsaday, dhallinyaradii Qeerada la baxday ee kacdoonka wadday ayuuna taageero badan ka helay”. Ayuu intaas ku sii daray Mukhtaar.
Raysal wasaaraha Itoobiya ayaa sidoo kale kalsooni wayn ku qaba oo ay aad isugu dhaw yihiin Lema.
Intii uuna Abiy Axmed Ra’iisulwasaare noqonna wuxuu madaxweyne ku xigeen u soo noqday Lema.
“Lema markii hore toos ayuu ii xukumay, haddana si dadban ayuu ii xukumaa” ayuu mar ku kaftay Abiy intii uu Raysal wasaaraha noqday.
“Haddii runta laga hadlo walaac badan ayaa arrintan laga muujiyay, sababtoo ah waa nin ay ku wayntahay Oromonimadu, loomana arko nin qaranka matali kara,”
“Intii uu ahaa madaxweynaha gobolka Oromada dagaal ayaa ka dhacay dhammaan goboladii ay xadka la lahaayeen, sida gobolka Beenhsaalgulka, kan Amxaarada, shucuubta Koonfureed iyo dhammaan gobollada kalaba,”
“Tusaale ahaan gobolka Soomaalida iyo Oromada dagaal ayaa ka dhex dhacay waxaana Oromo ka soo qaxay dad hal milyan kor u dhaafaya” ayuu yiri Mukhtaar Ismaa’iil oo wax ka qora arrimaha Itoobiya.
“Magacaygu waa Xasan Siciid waxaana dhihi lahaa Lemma Megersa wuu ka soo bixi doonaa xilkan, isbadal ayaana iman doona” ayuu yiri Xasan Siciid oo BBC-da la hadlay.
Mukhtaar Ismaa’iil wuxuu hadalka ku soo gabagabeeyay in Lemma uusan madaxweyne u ahayn gobolka Oromo ee uu masuul u yahay in kabadan 100 milyan oo ruux oo Itoobiyaan ah loona baahan yahay in uu badalo sida uu u fikirayo.
Nigeria: Boko Xaram oo magaalo ay qabsatay ku dishay 150 rayid ah